I-Pokémon Go ifikelela kumazwe angama-26 kwaye igcwalisa iiseva | IPhone iindaba
I-Pokemania iyaqhubeka nokusasazeka, ngaphandle kwabasebenzisi esele benomdlalo iintsuku. Kwaye, iiseva ezisetyenziswa yiNiantic kwiPokémon Go ngokucacileyo azonelanga, eSpain akunakwenzeka ukuba kudlalwe ngeyure eziqhelekileyo, enyanisweni, izolo iqale ukusebenza ngokuthe ngcembe ukusuka nge-01: 00 AM. Okwangoku, ulwandiso luyaqhubeka, i-Pokémon Go ifikelele kumazwe angama-26 izolo nangona iiseva zingekafiki, oko kubangela ukungoneliseki kwabasebenzisi abaninzi kunye nomsindo wabo bangakwaziyo ukuqhubela phambili.
Kunzima kakhulu ukufikelela kumanqanaba aqwalaselweyo ngenxa yemeko embi yeeseva. Ngapha koko, eyona nto intle kukuba xa ungaphakathi, awuphumi. Nangona kunjalo, kukho amaxesha aphindaphindiweyo apho umdlalo usilela ukubamba iPokémon kwaye unyanzele ukuba uyivale, ubuncinci kuhlobo lwayo lwe-iOS. Ke, Kuyacetyiswa ukuba kudlalwe ngamanye amaxesha xa abaphulaphuli abancinci besicelo bengafumaneki, kusasa okanye ebusuku.
I-Pokémon GO iyafumaneka kumazwe angamashumi amabini anesithandathu amatsha. Ukusukela ngokuhlwanje, abaqeqeshi abahlala e-Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, IRomania, iSlovakia, iSlovenia, iSweden, neSwitzerland ziyakwazi ukukhuphela i-Pokémon GO kwiVenkile yokuDlala okanye kwiVenkile yeApp.
Ngakumbi nangakumbi umdla wePokémon uyavela, kwaye ngoku kula mazwe matsha angama-26 ungonwabela ngendlela efikelelekayo ngokupheleleyo. Ngeli xesha, INiantin kunye neNintendo kufuneka baqwalasele ukwandisa iiseva zabo ukulungiselela abasebenzisi abangaphezulu kwezigidi ezingama-21 zemihla ngemihla ezisebenzayo ezenziwa yiPokémon Go kwaye baphakamise izabelo zeNintendo nge-80%.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Pokémon Go ifikelela kumazwe angama-26 kwaye igcwalisa iiseva kwakhona
USamuel Afonso Matos sitsho
Inyani yile yokuba ndiyikhuphele ngomhla wokuhamba kwaye kungcungcuthekisa ukudlala ... Logama nje iqhubeka ngoluhlobo, ndizakuphela ndiyishiya ecaleni.
Phendula kuSamuel Afonso Matos
Oku kubizwa ngokuba kukufa ngempumelelo.
Yiloo nto kuthiwa kukufa yimpumelelo.
Isityholo se-iPhone 7 siza kuvela kule vidiyo ngokweenkcukacha ezipheleleyo